पुरुष महिलाको छाती मा किन धेरै अकर्सित हुन्छन ? कारण यस्तो छ ! – Bihani Online
पुरुष महिलाको छाती मा किन धेरै अकर्सित हुन्छन ? कारण यस्तो छ !
१२ आश्विन २०७४ ११:२२ September 28, 2017 bihani
पुरुष महिलाको छाती मा किन धेरै अकर्सित हुन्छन ? यो प्रस्न महिला को दिमाग मा प्राय रहन्छ,तर यसको जबाफ खास मा पुरुषहरु संग पनि हुदैन । उत्तर बिबिध खाले भय पनि स्पस्ट रुपमा कसैले पनि भन्न सक्दैनन् कि किन पुरुष हरु महिला को छाती मा धेरै अकर्सित हुन्छन तर यसमा भएको एक अध्यन ले धेरै अन्य कारण अगाडी लिएर आएको छ ।
सामान्यतया जब पुरुस महिला संग गफ गर्न सुरु गर्दछ, तब उसको नजर सिधा आखा संग आखा जुध्नु को सट्टा पहिला महिला को छाती मा जादछ । त्यसपछी गर्दन हेर्दछ अनि मात्रै आखा संग आखा जुधदछ । खास कुरा यस्तो बडी ल्यांगवेज अगाडी को महिला ले तुरन्तै बुझदछिन र उनी त्यस व्यक्ति को सोच को बारेमा अन्दाज लागाउदछिन ।
वास्तब मा हरेक पल्ट पुरुष को मानसिकता गलत नै छ भन्नु मुर्खता हुन्छ । एक अध्‍ययन अनुसार पुरुषहरु गफ को सुरुवात गर्नु पुर्ब छाती मै हेर्दछन किनकि छाती नै नारीत्वको पहिचान हो र सेक्सअपिल को माध्यम सम्बन्ध गाडा बनाउन सकिन्छ भन्ने उसलाई लाग्दछ ।
अध्यन अनुसार समय छोटो या बडी छ भने पुरुष धेरै समय छाती मा हेर्दैनन् । उसको नजर एक सेकेन्ड भन्दा पनि कम समय मा हटीसक्छ । कुरा गर्दा पुरुष को नजर तब जान्छ जब महिला को छाती सेक्सी र मध्यम साइज हुन्छ ।
यदी कपडा को बाहिर पनि हल्का केहि नजर आयो भने पनि पुरुष को नजर धेरै चोटी महिला को छाती मा जादछ । आकर्सक स्तन ले पुरुष हरु ठिक तरिका ले गफ गर्न सक्दैनन् किनिकी उसको दिमाग ले बारम्बार त्यहि छाती मै हेर्न को लागि अराउदछ त्यसकरण नचाहदा नचाहदै पनि पुरुष को नजर महिला को छाती मा पुग्दछ ।
यसो हुदा कयौ चोटी महिला लाइ गलत भ्रम पनि पर्न सक्छ ।अध्‍ययन अनुसार यदी महिला टाडा नै उभी एकिछिन र पुरुष लाई हेरेकी छैनन् भने पनि ९५ % भन्दा पनि बडी पुरुष को नजर सबै भन्दा पहिला महिला को छाती मै पर्दछ । नजिक आउदा नजर हटे पनि सम्भोग को समय स्तन को धेरै महत्व पूर्ण रोल हुने हुदा पुरुष को नजर जहिले पानी छाती मई हुन्छ । हुनत कयौ चोटी सेक्स को सुरुवात यहि बाट सुरु हुन्छ ।
अध्‍ययन अनुसार पुरुष लाई आफ्नो तिर अकर्सित गर्न ६९% भन्दा बढी महिला आफ्नो स्तन राम्रो बनाउन धेरै समय खर्छ गर्छन । महिलाको वक्षस्थल बारेका केही रोचक तथ्य महिलाको वक्षस्थल एक महत्वपूर्ण प्रजनन अंग मात्र होइन सुन्दरताकेा प्रतिक पनि मानिन्छ । त्यहीँ भएर होला महिलाहरु आफ्नो वक्षस्थलको सुन्दरताप्रति निकै सजग हुन्छन् । वक्षस्थलको स्वरुपले महिलाको समग्र सुन्दरतामा प्रभाव पार्छ ।
केही समय पहिले एक विदेशी अनलाइनले गरेको सर्भेक्षणले एउटा अनौठो तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस अनुसार ७४ प्रतिशत पुरुषहरुले जब महिलालाई हेर्छन् तब उनीहरुको पहिलो नजर महिलाको अनुहारमा पर्छ । त्यसपछि गर्दन र त्यसपछि वक्षस्थलमा पर्छ । यहाँ महिलाको वक्षस्थल सम्बन्धि अन्य केही रोचक प्रसँग समावेश गरिएको छ ।
महिलाको अन्तरवस्त्र बिक्रि गर्ने कम्पनी इन्टीमेसीद्धारा गरिएको सर्भेका अनुसार ४८ प्रतिशत महिलाहरु आफ्नो खास वक्षस्थलको साइज भन्दा १ वा २ इन्च ठूलो ब्रा लगाउँछन् । ८५ प्रतिशत महिलाले गलत साइजको ब्रा लगाउँछन् ।
इन्टरनेशनल जर्नल अफ सेक्सुअल हेल्थको सर्भेक्षणका अनुसार ७० प्रतिशत युवतीहहरु आफ्नो वक्षस्थलको आकारबाट असन्तुष्ट छन् ।
सन् २००६ मा गरिएको एक सर्भेक्षण अनुसार ८२ प्रतिशत युवतीहरु वक्षस्थलको स्पर्शबाटै यौन सम्बन्धका लागि उत्तेजित हुने गर्छन् ।
गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डस्का अनुसार विश्वमा सबैभन्दा ठूलो आकारको वक्षस्थल भएकी महिलाको ब्रेष्टको साइज ५.८३ फुट अर्थात् ७० इन्च रहेको छ । सन् २०११ मा अमेरिकामा २ लाख ८६ जना जना महिलाले स्तनको शल्यक्रिया गरी आकार बढाए ।
क्यानडामा गरिएको शोधका अनुसार स्तन प्रत्यारोपण गराउने महिलाहरुमा आत्महत्या गर्ने जोखिम ७३ प्रतिशत बढि हुन्छ ।महिलाको बायाँ स्तन दायाँ भन्दा केही ठूलो हुन्छ । अमेरिकी शोधकर्ताहरुका अनुसार महिलाहरुको स्तनको आकार हरेक घण्टा घटबढ भइरहन्छ । कहिले त मिनेट मिनेटमै पनि । तर यस्तो परिवर्तन यति न्यून हुन्छ की महिलालाई थाहै हुँदैन ।
साइकोलोजी टुडे पत्रिकाले गरेको सर्भेक्षणका अनुसार गरीब पुरुषहरुले ठूलो वक्षस्थल भएका महिलालाई मन पराउँछन् भने धनी पुरुषहरुले सानो वक्षस्थल भएका महिला रोज्छन् । सोही पत्रिकाको अर्को एक अध्ययन अनुसार भोको पेट भएको बेला पुरुष ठूला स्तनतर्फ आकषिर्त हुन्छ भने टन्न खाएको बेला सानो वक्षस्थल मन पराउँछ । नयाँ खोजबाट
झापा र बर्दियामा गरी २ जनाको मृत्यु,कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४,५१ पुग्यो
युएईबाट १ सय ६८ जना नेपाली लिएर एयर अरबियाको जहाज काठमाडौं आइपुग्यो
कोरोना संक्रमणबाट बिहानै गर्भवतीसहित थप ४ जनाको मृत्यु
बृहत योग एवं आर्युवेद शिविर समापन
तपाईलाई थाहा छ काँचो केराको यी महत्वपूर्ण फाइदाहरु
नसर्ने रोगसम्बन्धी ‘पेन’ कार्यक्रम लागू
वडादशैँको आठौं दिन आज महाअष्टमी पर्व
दशैंका बेला होस् वा अरु कुनै बेला मासु कति खाने ? कसरी खाने ?